नेपाली जनता स्वस्थ रहे देश स्वस्थ रहन्छ ! | Kattwal.com
नेपाली जनता स्वस्थ रहे देश स्वस्थ रहन्छ !
काठमाडौं, २६ चेत्र : विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को कोलाहल मच्चिएको छ । विश्व जगतनै मानब सभ्यतानै खतरामा पर्ने भयले त्रसित छ । बिश्लेषकहरुले भनेका यो तेस्रो विश्व युद्ध नै हो। कुनै पनि देश कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त हुन सकेनन् । विश्वका दुई सय आठ देश कोरोना भाइरस विरूद्धको लडाइ लडिरहेका छन् । प्रश्न यति मात्र होकी कुन देशले कोरोना विरूद्धको लडाइ कसरी लडि रहेको छ ? कति देशले सफलता हासिल ग¥यो । कतिले असफलता हासिल ग¥यो । यो उनीहरुको आन्तरिक स्वास्थ्य सुरक्षा संयन्त्रको विषय रहला।
हिजोका प्रथम र दोस्रो विश्व युद्ध आआफ्ना देशका स्वार्थका कारणले लडियो । शक्ति सन्तुलनका लागि लडियो । साम्राज्यवादको प्रभाव, सैन्यवाद तथा शसस्त्रीकरणको प्रभाव, सामरिक शक्तिको प्रभाव र उग्र राष्ट्रवादको प्रभावका कारणलेनै विश्वयुद्ध हुन पुग्यो । जसका कारण करोडौं मानिसको मानब लीला समाप्त भयो, करोडौं मानिस अंगभंग भए भने करोडौ मानिस विभिन्न रोगबाट ग्रसित भएर मृत्युबरण गर्नु प¥यो । ठूलो जनधनको क्षति भयो । त्यो युद्ध पश्चात जर्मनी जस्ता देश पुरै आर्थिक संकटमा परे भने अमेरिका विश्वकै शक्तिशाली देश बन्न पुग्यो। यो कोरोना भाइरसको युद्धमा पनि विश्व पूर्ण रूपमा आर्थिक मन्दिमा जान सक्ने खतरा देखिन्छ। मानौ १९३० को आर्थिक मन्दि नआउला भन्न सकिन्न ?
विश्वभरका सम्पूर्ण नागरिकलाइ आज एउटा जिम्मेवारी थपिएको छ, हिजो उग्रराष्ट्रवादका कारण आफ्नो ज्यानको बाजि लगाएर देश र जनताको रक्षा गर्नु पर्ने कारणलेनै प्रथम र दोस्रो युद्ध लडियो त आज कोरोना विरूद्धको लडाइमा प्रत्येक नागरिकले सहभागीता जनाएर आफुलाई राष्ट्रवादी बनाइ आफुलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित राखेर देश र जनतालाई बचाउने अवसर जुरेको छ। यस्तो अवसर सायद विरलै प्राप्त हुन्छ । यस्को सहि सदुपयोग गरि आफुलाई सच्चा देशभक्त राष्ट्रवादी सिपाहिको रूपमा प्रस्तुत भइ सम्पूर्ण नागरिकहरुले आफ्नो कर्तव्य पालना गरौ । आफु सुरक्षित रूपमा बसौ र अरूलाई सुरक्षित राखौ, लकडाउनको पुर्ण पालना गरौ, साबुन पानीले घरीघरी हात धोऔं,सेनिटाइजरले हात सफा गरौ, पौष्टिक आहार सेवन गरौ र शरिरलार्इ फुर्तिलो बनाई राखौं । व्यक्ति स्वयं स्वस्थ रह्यो भने देश स्वस्थ रहन्छ । देशलाई स्वस्थ बनाउने कुरा नागरिकको हातमा छ ।
हरेक रोगसँग लड्ने कुरा हरेक ब्यक्तिको रोगसँग लड्ने प्रतिरक्षात्मक क्षमता अथवा इम्युनिटी सिस्टमसँग सम्बन्धित रहन्छ । प्रतिरक्षात्मक क्षमता मानिसको रहनसहन र खानपिनले प्रभाव पार्छ । स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ खानपिनलेनै मानिसको आयु लम्ब्याउछ । त्यसैले हरेक संकटबाट बच्न एउटा न एउटा उपाय अबस्य हुन्छ । जहाँ समस्या छ त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ। यहिले विश्व कोरोनाको कहरमा घिटिघिटी रहेको बेला हाम्रो देश पनि कोरोनाबाट मुक्त छैन् । यो महाब्याधीले विश्वलाई अबस्य पाठ सिकाउने छ । आफुलाई समृद्ध र शक्तिशाली ठान्ने केही देशहरू यो संकटबाट गतिलो पाठ सिक्नेछन् । जस्ले समयमा पाठ सिक्छ उस्लेनै सफलता हासिल गर्न सक्छ । हाम्रो देशले किन पाठ नसिक्ने ?
नेपाल भौगोलिक रुपमा सानो र गरिब देशको स्वास्थ्य सुरक्षा अबस्था कमजोर हुदा यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । प्रबिधियुक्त ठूला अस्पतालहरुको कमी छ । भाइरस परिक्षण गर्ने उपकरणको अभाव छ । प्रसस्त क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनको कमि छ । कमीका बावजुद पनि कोरोनाले नेपालमा क्षति हुन सकेको छैन । यो नेपालीक लागि खुशीको कुरा होे । यति भनी रहदा नेपालले यसबाट गतिलो पाठ भने सिक्न जरुरी छ । अन्य देशको तुलनामा नेपाल पनि गरिब मुलुक हो। नेपालको प्रमुख लडाइँनै गरिबी हो । विश्व संकट समाधानपछि देशले समृद्धिको बाटो किन नरोज्ने ? माटो सुहाउँदो विकास पद्ती किन नअपनाउने ?
हिन्दीमा एउटा काहावत छ
“इन्सान दौलत के लिए अप्नि पुरी सेहद खोदेति है
उसि सेहद बचाने के लिए पुरी दौलत खोदेती हैू ।”
यसको नेपाली अर्थ हो । मानिस आफ्नो स्वास्थ्यको ख्यालै नगरि पैसा कमाउन लाग्छ जब उसको स्वास्थ्यस्थिति बिग्रन्छ अनि मात्र जीवनभर कमाएको पैसा उपचारमा खर्चिन्छ । यो भनाईले मानव जीवनका लागि स्वास्थ्य कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने बुझिन्छ । कोरोना कहरबाट उन्मुक्ति पाएपछि राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ । देशका दुर्गम गाउँ,बस्तीहरुमा प्रबिधियुक्त स्वास्थ्य सेवा बिस्तार गर्नुपर्छ । यसो गरियो भने मात्र देशले समृद्धिको बाटो तय गर्नेछ । सुखी नेपाली,समृत नेपालको नारा पुरा हुनेछ ।
विकास हामीले आफ्नो मौलिकतामा गर्ने हो। कृषि क्षेत्र नेपालको आफ्नै मौलिकता हो । करिब ७०% नेपाली कृषि पेशामा निर्भर छन् । र पनि बर्षेनी खाधान्यको अभाव छ,मौषमी भोकमरि यथावत छ । दुर्गम गाउँ,बस्तीका बालकहरु कुपोषित छन । खान नपाएर दिनहुँ विभिन्न रोगसंग लडिरहेका छन । रातदिन माटोमा बिताउने किसाननै सबैभन्दा गरिब छन् ।
मानिसको आयु,रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता,उसको खानपिन र रहनसहनले प्रभाव पार्छ । त्यो भनेको कृषि क्षेत्रनै पुर्ती गर्न सक्छ । यसो भने भने किन बैज्ञानिकयुक्त कृषि क्षेत्रको विकास लागि राज्यले यथेष्ट लगानी नगर्ने ?
जल,जंगल,जमिन प्रसस्तता भएको यो देशमा जडिबुटी उत्पादन,आधुनिक प्रबिधिको प्रयोग गरी अर्गानिक कृषि प्रणालीमा जोड दिन जरुरी छ । पढेलेखेका युवाहरुलाई घाडी मुलुक धाउनको साटो कृषि क्षेत्रमा लगाउन जरुरी छ । विभिन्न देशबाट आउने खाधान्य आयातलाई रोक लगाई यहाँका नागरिकहरुलाई मौलिकतामा बाच्न सिकाउनु पर्छ । हरेक देशले देखासिखीमा होईन आफ्नो मौलिकतामा विकास गरेको हुन्छ । त्यसैले आफ्नो मौलिकता बुझौ। सबै कोरोना विरूद्धको लडाइमा एकजुट बनौ,आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरौ अब उपरान्त देश आफ्नो मौलिकताको खोजीमा अघि बढोस अनि मात्र सुखि नेपाली,समृद्ध नेपालको नारा पुरा हुनेछ ।
लेखक नेकपा अछामका युवा नेता हुन् ।
कर्णालीमा पनि डेंगुको संक्रमण देखियो
भजनीका कृषकलाई कृषि उपकरण बितरण
टीकापुरमा आज देखी डल्फिन महोत्सव
अग्नी पिडीत दलितको घाउमा मेयरको मलम